Firefox 88.0.1 inogadzirisa matambudziko nezvakachengetedzwa zvemukati | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla inowanzoita mushe nezvinoburitswa. Pane akati wandei apo pavanoburitsa ekugadzirisa ekugadzirisa, uye iyo vhezheni inoburitsa matatu mumwedzi haigone. Iyo vhezheni yakaburitswa muna Kubvumbi 2020 haizove imwe yeaya anogara mune zero-poindi vhezheni, kubvira nguva shoma yapfuura ivo vatangisa Firefox 88.0.1 nenhau dzingaite senge dzakakosha kune vazhinji vashandisi, asi kune zvimwe kune avo vanotenga vhidhiyo zvemukati online.
Zvikurukuru, Firefox 88.0.1 yasvika kugadzirisa zvipembenene zvina, uye iyo inoita senge inonyanya kuzivikanwa ndiyo yekutanga yavanotaura: chigamba chinogadzirisa dambudziko rakakonzerwa neazvino gadziriso yeWidevine plugin izvo zvakatadzisa zvakatengwa zvemavhidhiyo zvemukati kutamba zvakanaka. Pazasi iwe une rakazara runyorwa rwemashoko.
Chii chitsva muFirefox 88.0.1
Yakagadzirisa nyaya yakakonzerwa neshanduro yazvino kuWidevine plugin yakadzivirira zvimwe zvakatengwa zvemavhidhiyo zvemitambo kutamba nemazvo.
Yakagadziriswa huwori hwemavhidhiyo akaridzwa paTwitter kana WebRTC inoshevedza kune mamwe maIntel Graphic Gen6 chipsets.
Yakagadzirisa runyorwa rwemamenyu mune zvaunofarira izvo zvaisagona kuverengerwa vashandisi vane yakakwira musiyano modhi yakaitwa.
Kugadzikana kwakasiyana siyana nekugadziriswa kwekuchengetedza.
Firefox 88.0.1 inowanikwa yanga ichingovepo kwenguva pfupi, saka zvichiri kutora maawa kana mazuva kuti usvike kwakawanda kugoverwa kweLinux. Ivo avo vanoda kushandisa mabhainari avo vanogona kudhawunirodha kubva kune yavo website yepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Gadziridza bhurawuza rako kuenda kuFirefox 88.0.1 dai waive uine matambudziko nezvakachengetedzwa zvemukati
Verengai Linux 21 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo